निर्वाचन आयोगलाई प्रचण्ड–माधव समूहको प्रश्न : ओलीलाई के आधारमा अध्यक्ष भनिँदैछ ?
२७ पुस, काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले पार्टीको आधिकारिकता विवादमा संविधान, कानुन, ऐन र विधिको आधारमा निर्णय लिन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।
नेताहरुले केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष भनी सम्बोधन गरेको पत्र पठाएको र उक्त समूहले बुझाएको कागजपत्रलाई आधार बनाएको भन्दै आपत्ति जनाए । पार्टी विधान बमोजिम दुई तिहाइ बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले कारबाही गरिसकेको र त्यो जानकारी आयोगलाई दिइसकेपछि ओलीलाई कसरी अध्यक्ष भन्दै हुनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरिएको नेता पोखरेलले बताए ।
‘तपाईंहरुले केका आधारबाट उहाँहरुले बुझाएको कागजपत्रहरु सहज रुपमा लिनुभयो ?’, माधव नेपालले प्रश्न गरेका थिए । ओली समूहले ल्याएको पत्र अध्ययन नै नगरी दर्ता गरेकोमा नेपालले आपत्ति जनाएका थिए । ‘पार्टीको विधानले १० प्रतिशतभन्दा बढी मनोनयन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ, तर ११९९ सय सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको विवरण कसरी बुझ्नु भयो ?’, उनले प्रश्न गरेका थिए ।
प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुले भने बारम्बार किन दलसम्बन्धी ऐनको ४४ (१) अनुसार, दलको वैधानिकता दाबी गर्न भन्दै पत्र पठाएको भनेर प्रश्न गरेका छन् । ‘महाधिवेशन भएको छैन । यस्तो अवस्थामा आयोगमा भएको कागजपत्र हेरेर दलको वैधानिकता दाबी गर्न आउनेहरुलाई पो यस्तो पत्र लेख्ने हो । तर, हामीलाई किन लेख्नु भयो भनेर सोध्यौं’, नेता पोखरेलले भनेका छन् ।
विराटनगर माघे संक्रान्ती फुटबलको सेमिफाइनलमा